ISinocare iye eMEDICAL FAIR THAILAND 2019-News-Sinocare
USinocare waya eMEDICAL FAIR THAILAND 2019
Isikhathi: 2019-09-13 Hits: 210
Kusuka ngomhla ka-11-13 Septhemba, 2019, uhlelo lwe-9th lweMEDICAL FAIR THAILAND lubanjwe ngempumelelo eThailand Bangkok.
I-MEDICAL FAIR THAILAND ibibanjelwe uMesse Düsseldorf Asia (MDA), onomlando osungulwe kahle ukusukela ngonyaka we-2003, uyaqhubeka nokukhula usuka emandleni uye emandleni njengombukiso omkhulu kunawo wonke waseNingizimu-mpumalanga ye-Asia womkhakha wezokwelapha nowezempilo. Kungumcimbi waseThailand ongu-1 womkhakha wezokwelapha nowezempilo.
“Ukusuka Kumdidiyeli Kuya ekubeni Ingcweti.” Njengomkhiqizi wokuqala wokuqapha ushukela egazini eChina, iSinocare inikeza amasistimu wokuqapha ushukela wegazi onembile, ongabizi, futhi olula ukusebenzisa, le mikhiqizo yamukelwe kahle yizo zonke izingxenye zamakhasimende kulo lonke elaseChina, ngaphezu kuka-50% wesifo sikashukela uqobo -ukuqapha abantu abasebenzisa imikhiqizo yeSinocare.
Ukuba nesistimu yokuqapha ushukela egazini kuyisinyathelo sethu sokuqala kuphela. Lesi yisikhathi sethu sokuqala ukuba khona eMedical Fair eThailand, kulo mcimbi, siphinde saletha nezinhlelo zokuqapha ezisebenza ngemisebenzi eminingi (i-blood glucose - uric acid; blood glucose - ketone); Isihlaziyi se-HbA1c; I-ACR Analyzer (creatinine; MAU) njll.
Ngesikhathi somcimbi, amaklayenti ethu akhombise ukuqashelwa okukhulu kwemikhiqizo.
Ngokusebenza ngothando, sithuthukisa ikhwalithi yempilo yeziguli ezinesifo sikashukela nezinye izifo ezingalapheki.
Ikhasi Langaphambili: Izikhulu zePanamani Medical and Health zivakashele iSinocare Inc.
Ikhasi elilandelayo: Ingqungquthela yokuqala yabathengisi beSinocare Ebanjelwe eDelhi